गर्भावस्थामा गरिने एनोमली स्क्यान के हो? के-के पत्ता लगाउन सकिन्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
गर्भावस्थामा गरिने एनोमली स्क्यान के हो? के-के पत्ता लगाउन सकिन्छ?
मुना आचार्य पाठक बुधबार, चैत १८, २०७७, ०६:१४:००
गर्भावस्था हरेक महिलाको जीवनमा आउने विशेष र जोखिमपूर्ण अवस्था हो। प्रत्येक महिलाले गर्भावस्थामा हुने परिवर्तन र जटिलताबारे ज्ञान राख्दा यसलाई न्युनिकरण गर्न सहज हुन जान्छ। समय समयमा र आवश्यक परे अनुसार गर्भावस्थामा नियमित परीक्षण गराउन जरुरी छ। गर्भ परीक्षण सँगसँगै गर्भको भिडियो-एक्सरे (अल्ट्रासाउन्ड) पनि आवश्यक परे अनुसार गरिन्छ। गर्भ २० हप्ताको हुँदा अल्ट्रसोनोग्राफीद्वारा वृस्तित रुपमा गरिने परीक्षणलाइ एनोमली स्क्यान भनिन्छ।
एनोमली स्क्यान (विसंगति/अपांगला स्क्यान) प्राय गर्भावस्थाको २० हप्तामा गरिन्छ। यो स्क्यान मान्यता प्राप्त रेडियोलोजिष्टद्वारा गरिन्छ। यस स्क्यानले गर्भमा रहेको बच्चाको विकास अनुगमनको साथसाथै आमाको पाठेघरको अवस्था पनि परीक्षण हुन्छ। यसमा बच्चाको शरीरको विभिन्न अंग र भागको स्क्यान गरिन्छ जस्तै - मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मुटु, पेट, हात/गोडा, मिर्गौला इत्यादि। यस स्क्यानद्वारा बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकास कस्तो रुपमा भइरहेको छ भन्ने पत्ता लाग्दछ। साथै सालको अवस्था पनि थाहा हुन्छ। यो आमा र बच्चा दुवैको लागि सुरक्षित प्रक्रिया मानिन्छ।
एनोमली स्क्यानबाट पत्ता लगाउन सकिने केही प्रमुख दोष अथवा अपांगता यस प्रकार छन्:
क्लेफ्ट लिप : ओठ काटिएको
एननकेफाली: मस्तिष्कको प्रमुख भाग नभएको
डायफ्रामेटिक हर्निया: असामान्य रुपमा डायफ्राम खुल्ला हुनु
ग्यास्ट्रोसिसिस: आन्द्रा बाहिर निस्किनु
एक्जोमफ्यालस: बच्चाको आन्द्रा, कलेजो र अरु अंग पेटबाट बाहिर निस्कनु
ओपन स्पाइनल बाएफिडा: मेरुदण्ड पूर्ण रुपमा विकास नहुनु
बाइलेटरल रेनल अजेनेसिस: एक वा दुबै मिर्गौला नहुनु
लेथल स्केलेटल डिस्प्लेसिया: हड्डी विकासमा असर गर्नु
मुटुको असामान्य बनावट र गतिविधि
एडवार्ड सिन्ड्रोम: जीनसँग सम्बन्धित समस्या
पटउन सिन्ड्रोम: जीन/क्रोमोजोम सँग सम्बन्धित समस्या
एनोमली स्क्यानको प्रक्रिया अरु सामान्य अल्ट्रासाउण्ड जस्तै नै हुन्छ तर यसमा अरुमा भन्दा बढि समय (३० मिनिट जति) लाग्छ। स्क्यान सकिएपछि प्राप्त रिपोर्ट अनुसार थप परीक्षण आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारे छलफल हुन्छ।
यस सक्यान बारे सबै महिलाले जानकारी राख्दा फलदायी हुन्छ र समयमा नै समस्या पत्ता लगाएर त्यसको निवारण गर्न सकिन्छ। प्रत्येक गर्भवती महिलाले २० हप्तामा यो स्क्यान गर्न एकदमै जरुरी छ।
(रजिस्टर्ड नर्स पाठक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएनएस उत्तीर्ण हुन्)
कोभिड-१९ महामारीका बेला सुरक्षित रुपमा स्तनपान कसरी गराउने? यदि स्तनपान गराइरहेकी आमामा कोभिड-१९ संक्रमण भएको शंका लागेको छ वा पुष्टि भएको छ भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर स्तनपानलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ। आईतबार, साउन १७, २०७८